Kukura kwedata uye vanopa index vanofambiswa neESG yepasi rose yekudyara kuwedzera
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kukura kwedata uye vanopa index vanofambiswa neESG yepasi rose yekudyara kuwedzera
ESG yekudyara yakura kusvika kune zvisingaenzaniswi zvepamusoro mumakore achangopfuura, kutyaira kwakakura kudiwa kweiyo yakazara ESG dhata / analytics pamwe nekuwedzera ESG index zvinopihwa kuti zvienderane akasiyana siyana matsva ekudyara masitayera. Dzese data uye vanopa index vari kuisa kuwedzera kusimbisa pazvikamu izvi kuti zvienderane nekushanduka kuri kuita ESG inzvimbo yekudyara zvinoenderana nekutsvaga kutsva kwakaburitswa nhasi neBurton-Taylor International Consulting, chikamu cheTPP ICAP's Data & Analytics chikamu, Parameta Solutions.
"Vanopa Index varikugadzirisa makambani ekudyara kuti vawedzere kuburitswa nemari yakabatana neESG, kunyanya iyo yakanangana nenyaya dzemamiriro ekunze, sezvo kugadzikana kuchiiswa kumberi kwekushushikana kwenzanga," anodaro Sean Eskildsen, muongorori kuBurton-Taylor. "Kukura kwakasimba kungangoenderera mumakore anouya, kunyangwe zviito zvekutonga nemamiriro ezvinhu akasiyana emusika zvichaedza mafungiro evashambadzi muchikamu ichi," anowedzera.
"Inotungamirwa nevasingatore mari yekudyara uye kudiwa kwemaindasitiri, vanopa data zvemari vachangotarisana nekupa zvigadzirwa neruzivo izvo zvinobatsira vatengesi kutora mukana wekutarisa kuteedzera kwemabhizimusi kune zvakatipoteredza, zvemagariro, uye zvehutongi," anodaro Adler Smith, muongorori kuBurton-Taylor, achiwedzera. kuti "Uku kudiwa kweESG data / analytics kunobva kumativi ese emisika yemari, asi inonyanya kukoshesa nekutenga-divi."
Burton-Taylor nhasi azivisa kuburitswa kwemishumo mitsva miviri inovhara ese ESG index uye data maindasitiri. Iyo ESG Index mushumo inoongorora mari yepasi rose nemupi uye inopa nzwisiso kune vatyairi veESG index kukura. Iyo ESG Dhata / Analytics mushumo unotarisa iri kuwedzera basa ESG dhata / analytics iri kutamba mumisika yemari uye maitiro evanopa data vari kuita shanduko.